ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်တိုင်း မဖြစ်မနေဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ် (၂) အုပ် – For her myanmar
ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်တိုင်း မဖြစ်မနေဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ် (၂) အုပ်
Posted on May 25, 2018 August 2, 2019 Author Sugar Cane	Comment(0)
မကောင်းရင် အက်ဒ်မင်တို့ မညွှန်းပေးဘူး ယုံ…. 🙂
ဒီတစ်ပတ် စာအုပ်အညွှန်းကဏ္ဍမှာတော့ ပညာရေးရဲ့ အရေးပါပုံကို ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ စာအုပ်လေးနှစ်အုပ်ကို ညွှန်းချင်တာပါ။ အထူးသဖြင့် ပညာသင်ကြားဖို့ အကောင်းဆုံးအရွယ်တွေဖြစ်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်စေချင်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်လုံးကို ရေးခဲ့သူကတော့ စာရေးဆရာမ ဂျူးပါ။
ပထမဆုံးပြောပြချင်တာက ဆရာမဂျူးရဲ့ “စောင့်နေမယ်လို့ မပြောလိုက်ဘူး” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပါ။
Related Article – မြန်မာ့လူနေမှုဘဝတွေကို ခံစားနိုင်မယ့် စာအုပ်လေးနှစ်အုပ်
စောင့်နေမယ်လို့ မပြောလိုက်ဘူး – ဂျူး
အဲ့ဒီစာအုပ်မှာ အဓိကဇာတ်ကောင်မိန်းကလေးက အေသင်မိုးဆိုတဲ့ အသက် ၁၈နှစ်အရွယ်ကောင်မလေး တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ စူပါမားကတ်တစ်ခုက အရောင်းဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီး တိုးတက်ချင်စိတ်၊ ပညာသင်ယူလိုစိတ်ကြီးမားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ဆရာမဂျူးက အေသင်မိုးဆိုတဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင် တစ်ယောက်ကိုအဓိကထားပြီး သူမနဲ့ ဆက်နွယ်သူတွေဖြစ်ကြတဲ့ သူမရဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ယုယ နဲ့ ဇီဇဝါ၊ သူမကို တစ်ဖက်သက်မေတ္တာရှိနေသူ ဉာဏ်သာ၊ သူမရဲ့ အလုပ်ရှင်လည်းဖြစ် ဉာဏ်သာရဲ့ အကိုလည်းဖြစ်သူ ဒေါက်တာဟန်သာ၊ သူမရဲ့ အချစ်ဆုံး အလေးစားရဆုံးနဲ့ အေသင်မိုးရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်ဝအောင်ကူညီပေးနေသူ ဆရာမ ခက် စသူတို့ ဝန်းရံကာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်အောင်ဇာတ်လမ်းရေးဖွဲ့ထားပါတယ်။
အေသင်မိုးတစ်ယောက် အရောင်းဝန်ထမ်းဘဝကနေ NGO တစ်ခုမှာ အလုပ်ရပြီး အလုပ်ရှင်ဒေါက်တာဟန်သာနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ဒေါက်တာဟန်သာ နဲ့ အေသင်မိုးရဲ့ ဆရာမ ခက် တို့ ကြားမှာရှိတဲ့ တစ်ချိန်က ဆက်နွယ်မှုကို တစ်စတစ်စ သိရှိရိပ်မိလာခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဉာဏ်သာနဲ့အပြိုင် ယုယက အေသင်မိုးအပေါ် မေတ္တာရှိကြောင်းပြသပါတယ်။ ဒီလိုအကျဉ်းအကြပ်တွေကြားမှာပဲ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်း အကောက်ကြံမှုတွေကြောင့် အေသင်မိုးတစ်ယောက် သူနှစ်သက်ပျော်ရွှင်တဲ့ အလုပ်ကနေ ထွက်ရဖို့အထိ အကြောင်းဖန်လာတဲ့အခါ ….
ဒေါက်တာ ဟန်သာနဲ့ ခက်တို့ကြားက ဆက်နွယ်မှုကဘာလဲ ….
ယုယ နဲ့ ဉာဏ်သာနှစ်ယောက်ထဲက ဘယ်သူ့ကို အေသင်မိုးရွေးချယ်မလဲ ….
သူမရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်ဝဖို့ အေသင်မိုးတစ်ယောက်ဘယ်လိုလျှောက်လှမ်းမလဲ ..
ဒါတွေကိုသိချင်ရင်တော့ ဆရာမဂျူးရဲ့ “စောင့်နေမယ်လို့ မပြောလိုက်ဘူး” ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ကြပါနော်။
Related Article >>> မိန်းကလေးတွေရဲ့ အစွမ်းကို အထင်းသားမြင်နိုင်စေမယ့် စာအုပ်လေး (၂) အုပ်
နောက်ထပ်စာအုပ်တော့ “သူမင်းကိုဘယ်တော့မှ” ဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမင်းကိုဘယ်တော့မှ – ဂျူး
ဒီစာအုပ်မှာတော့ ဆရာမဟာ “အေးငြိမ်းမေ” ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးအကြောင်းကို ရေးဖွဲ့ထားတာပါ။အေးငြိမ်းမေ ဟာ အညာဒေသက ရွာလေးတစ်ရွာမှာ နေထိုင်တဲ့ ပညာလိုလားတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ သူ(မ)က ပညာလိုလားသလောက် ပညာသင်ကြားရာမှာ အမြဲတမ်းအခက်အခဲအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ ငယ်စဉ် ကျောင်းဆက်လက်တက်ရောက်ဖို့ အခက်အခဲရှိချိန်မှာ သူ(မ)ရဲ့ဘဝထဲကို ကယ်တင်ရှင်တစ်ဦးရောက်ရှိလာပါတယ်။ သူကတော့ ထင်လင်း ဆိုတဲ့ ပညာတတ်လူငယ်တစ်ဦးပါပဲ။ ထင်လင်းဟာ သူကိုယ်တိုင်မပြည့်စုံပေမယ့် သူ့လိုပဲ ပညာလိုလားတဲ့ အေးငြိမ်းမေ ဆက်လက်ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ အေးငြိမ်းမေ အထက်တန်းရောက်တဲ့အခါ ကိုထင်လင်းရဲ့ မိတ်ဆွေ မမမြတ်ခေါ် ဒေါ်မြတ်ကောင်းဆီမှာ နေထိုင်ရင်း ပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနေထိုင်ရင်း ကိုထင်လင်းနဲ့ မမမြတ်တို့ကြားမှာ သံယောဇဉ်ကြိုးချည်နှောင်ထားကြောင်း ရိပ်မိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အေးငြိမ်းမေ ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမှာ ကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ သုတ ဆိုသူနဲ့မေတ္တာမျှခဲ့ပါတယ်။ သုတဟာ အေးငြိမ်းမေကို ချစ်တဲ့ စိတ်နဲ့ အေးငြိမ်းမေနဲ့ ကိုထင်လင်းတို့ကြားကဖြူစင်တဲ့မေတ္တာကို သံသယဝင်လာတဲ့အခါ..
အေးငြိမ်းမေ တစ်ယောက် ဇာတိကိုစွန့်ခွာပြီး ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို စွန့်ခွာထွက်သွားရတာ ဘာအကြောင်းကြောင့်လဲ?
အေးငြိမ်းမေကြောင့် တင်းမာခဲ့ရတဲ့ ကိုထင်လင်းနဲ့ မမမြတ်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေး ပြေလည်နိုင်ဦးမှာလား?
အေးငြိမ်းမေကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အမှားကျူးလွန်ခဲ့မိတဲ့ သုတကိုရော အေးငြိမ်းမေကခွင့်လွှတ်ပေးမှာလား?
ဒါတွေကို သိချင်ရင်တော့ ဆရာမဂျူးရဲ့ “သူမင်းကိုဘယ်တော့မှ” ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ဖို့ ညွှန်းဆိုပေးချင်ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်လုံးမှာ တူညီတဲ့အချက်တော့ အဓိကဇာတ်ကောင် မိန်းကလေးငယ်တွေဟာ ပညာကို အထူးပဲလိုလားကြသူတွေပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပညာရေးကသာ သူတို့တွေရဲ့ဘဝကိုအမြင့်ရောက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ သူတို့သဘောပေါက်ထားကြလို့ပါ။ ဒါ့အပြင် ဒီစာအုပ်တွေမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတို့ရဲ့ဘဝ၊ သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေ၊ ဆင်းရဲမှုကြောင့် သူတို့ကြုံတဲ့အတားအဆီးတွေ၊ အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေဟာ ပညာတတ်ဖို့ဘာကြောင့်လိုအပ်ကြောင်း၊ ပညာရေးဟာ အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲစေနိုင်ကြောင်းကိုပါရေးသားထားပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ ဒီတစ်ပတ်မှာ ယောင်းတို့အတွက် အက်ဒ်မင်က ရွေးချယ်ပေးခဲ့တာပေါ့…
ထက်ထက်မြက်မြက် ယောင်းလေးတွေ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေကွယ်…
မကောငျးရငျ အကျဒျမငျတို့ မညှနျးပေးဘူး ယုံ….
ဒီတဈပတျ စာအုပျအညှနျးကဏ်ဍမှာတော့ ပညာရေးရဲ့ အရေးပါပုံကို ရေးဖှဲ့ထားတဲ့ စာအုပျလေးနှဈအုပျကို ညှနျးခငျြတာပါ။ အထူးသဖွငျ့ ပညာသငျကွားဖို့ အကောငျးဆုံးအရှယျတှဖွေဈတဲ့ ဆယျကြျောသကျလေးတှေ ဒီစာအုပျကိုဖတျစခေငျြပါတယျ။ ဒီစာအုပျနှဈအုပျလုံးကို ရေးခဲ့သူကတော့ စာရေးဆရာမ ဂြူးပါ။
ပထမဆုံးပွောပွခငျြတာက ဆရာမဂြူးရဲ့ “စောငျ့နမေယျလို့ မပွောလိုကျဘူး” ဆိုတဲ့ စာအုပျပါ။
Related Article – မွနျမာ့လူနမှေုဘဝတှကေို ခံစားနိုငျမယျ့ စာအုပျလေးနှဈအုပျ
စောငျ့နမေယျလို့ မပွောလိုကျဘူး – ဂြူး
အဲ့ဒီစာအုပျမှာ အဓိကဇာတျကောငျမိနျးကလေးက အသေငျမိုးဆိုတဲ့ အသကျ ၁၈နှဈအရှယျကောငျမလေး တဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ စူပါမားကတျတဈခုက အရောငျးဝနျထမျးဖွဈပွီး တိုးတကျခငျြစိတျ၊ ပညာသငျယူလိုစိတျကွီးမားတဲ့ မိနျးကလေးတဈယေောကျဖွဈပါတယျ။ ဒီဇာတျလမျးမှာ ဆရာမဂြူးက အသေငျမိုးဆိုတဲ့ အဓိကဇာတျကောငျ တဈယောကျကိုအဓိကထားပွီး သူမနဲ့ ဆကျနှယျသူတှဖွေဈကွတဲ့ သူမရဲ့သူငယျခငျြးဖွဈသူ ယုယ နဲ့ ဇီဇဝါ၊ သူမကို တဈဖကျသကျမတ်ေတာရှိနသေူ ဉာဏျသာ၊ သူမရဲ့ အလုပျရှငျလညျးဖွဈ ဉာဏျသာရဲ့ အကိုလညျးဖွဈသူ ဒေါကျတာဟနျသာ၊ သူမရဲ့ အခဈြဆုံး အလေးစားရဆုံးနဲ့ အသေငျမိုးရဲ့ရညျမှနျးခကျြတှပွေညျ့ဝအောငျကူညီပေးနသေူ ဆရာမ ခကျ စသူတို့ ဝနျးရံကာ စိတျဝငျစားဖှယျဖွဈအောငျဇာတျလမျးရေးဖှဲ့ထားပါတယျ။
အသေငျမိုးတဈယောကျ အရောငျးဝနျထမျးဘဝကနေ NGO တဈခုမှာ အလုပျရပွီး အလုပျရှငျဒေါကျတာဟနျသာနဲ့ ရငျးနှီးခဲ့ရပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ဒေါကျတာဟနျသာ နဲ့ အသေငျမိုးရဲ့ ဆရာမ ခကျ တို့ ကွားမှာရှိတဲ့ တဈခြိနျက ဆကျနှယျမှုကို တဈစတဈစ သိရှိရိပျမိလာခဲ့ပါတယျ။ တဈခြိနျတညျးမှာပဲ ဉာဏျသာနဲ့အပွိုငျ ယုယက အသေငျမိုးအပျေါ မတ်ေတာရှိကွောငျးပွသပါတယျ။ ဒီလိုအကဉျြးအကွပျတှကွေားမှာပဲ လုပျဖျောကိုငျဖကျအခငျြးခငျြး အကောကျကွံမှုတှကွေောငျ့ အသေငျမိုးတဈယောကျ သူနှဈသကျပြျောရှငျတဲ့ အလုပျကနေ ထှကျရဖို့အထိ အကွောငျးဖနျလာတဲ့အခါ ….
ဒေါကျတာ ဟနျသာနဲ့ ခကျတို့ကွားက ဆကျနှယျမှုကဘာလဲ ….
ယုယ နဲ့ ဉာဏျသာနှဈယောကျထဲက ဘယျသူ့ကို အသေငျမိုးရှေးခယျြမလဲ ….
သူမရဲ့ရညျမှနျးခကျြတှပွေညျ့ဝဖို့ အသေငျမိုးတဈယောကျဘယျလိုလြှောကျလှမျးမလဲ ..
ဒါတှကေိုသိခငျြရငျတော့ ဆရာမဂြူးရဲ့ “စောငျ့နမေယျလို့ မပွောလိုကျဘူး” ဆိုတဲ့စာအုပျကိုဖတျကွညျ့ကွပါနျော။
Related Article >>> မိနျးကလေးတှရေဲ့ အစှမျးကို အထငျးသားမွငျနိုငျစမေယျ့ စာအုပျလေး (၂) အုပျ
နောကျထပျစာအုပျတော့ “သူမငျးကိုဘယျတော့မှ” ဆိုတဲ့စာအုပျပဲဖွဈပါတယျ။
သူမငျးကိုဘယျတော့မှ – ဂြူး
ဒီစာအုပျမှာတော့ ဆရာမဟာ “အေးငွိမျးမေ” ဆိုတဲ့အမြိုးသမီးငယျလေးအကွောငျးကို ရေးဖှဲ့ထားတာပါ။အေးငွိမျးမေ ဟာ အညာဒသေက ရှာလေးတဈရှာမှာ နထေိုငျတဲ့ ပညာလိုလားတဲ့ အမြိုးသမီးငယျလေးဖွဈပါတယျ။ သူ(မ)က ပညာလိုလားသလောကျ ပညာသငျကွားရာမှာ အမွဲတမျးအခကျအခဲအမြိုးမြိုးနဲ့ကွုံတှရေ့ပါတယျ။ ငယျစဉျ ကြောငျးဆကျလကျတကျရောကျဖို့ အခကျအခဲရှိခြိနျမှာ သူ(မ)ရဲ့ဘဝထဲကို ကယျတငျရှငျတဈဦးရောကျရှိလာပါတယျ။ သူကတော့ ထငျလငျး ဆိုတဲ့ ပညာတတျလူငယျတဈဦးပါပဲ။ ထငျလငျးဟာ သူကိုယျတိုငျမပွညျ့စုံပမေယျ့ သူ့လိုပဲ ပညာလိုလားတဲ့ အေးငွိမျးမေ ဆကျလကျပညာသငျကွားနိုငျဖို့ ထောကျပံ့ပေးခဲ့ပါတယျ။ အေးငွိမျးမေ အထကျတနျးရောကျတဲ့အခါ ကိုထငျလငျးရဲ့ မိတျဆှေ မမမွတျချေါ ဒျေါမွတျကောငျးဆီမှာ နထေိုငျရငျး ပညာသငျကွားခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုနထေိုငျရငျး ကိုထငျလငျးနဲ့ မမမွတျတို့ကွားမှာ သံယောဇဉျကွိုးခညျြနှောငျထားကွောငျး ရိပျမိခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အေးငွိမျးမေ ဆယျကြျောသကျဘဝမှာ ကြောငျးနဘေကျ သူငယျခငျြးဖွဈတဲ့ သုတ ဆိုသူနဲ့မတ်ေတာမြှခဲ့ပါတယျ။ သုတဟာ အေးငွိမျးမကေို ခဈြတဲ့ စိတျနဲ့ အေးငွိမျးမနေဲ့ ကိုထငျလငျးတို့ကွားကဖွူစငျတဲ့မတ်ေတာကို သံသယဝငျလာတဲ့အခါ..
အေးငွိမျးမေ တဈယောကျ ဇာတိကိုစှနျ့ခှာပွီး ရနျကုနျမွို့ကွီးကို စှနျ့ခှာထှကျသှားရတာ ဘာအကွောငျးကွောငျ့လဲ?
အေးငွိမျးမကွေောငျ့ တငျးမာခဲ့ရတဲ့ ကိုထငျလငျးနဲ့ မမမွတျတို့ရဲ့ဆကျဆံရေး ပွလေညျနိုငျဦးမှာလား?
အေးငွိမျးမကေို ခဈြတဲ့စိတျနဲ့အမှားကြူးလှနျခဲ့မိတဲ့ သုတကိုရော အေးငွိမျးမကေခှငျ့လှတျပေးမှာလား?
ဒါတှကေို သိခငျြရငျတော့ ဆရာမဂြူးရဲ့ “သူမငျးကိုဘယျတော့မှ” ဆိုတဲ့စာအုပျကိုဖတျကွညျ့ဖို့ ညှနျးဆိုပေးခငျြပါတယျ။
ဒီစာအုပျနှဈအုပျလုံးမှာ တူညီတဲ့အခကျြတော့ အဓိကဇာတျကောငျ မိနျးကလေးငယျတှဟော ပညာကို အထူးပဲလိုလားကွသူတှပေါ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ပညာရေးကသာ သူတို့တှရေဲ့ဘဝကိုအမွငျ့ရောကျစနေိုငျတယျဆိုတာ သူတို့သဘောပေါကျထားကွလို့ပါ။ ဒါ့အပွငျ ဒီစာအုပျတှမှော ဆငျးရဲနှမျးပါးသူတို့ရဲ့ဘဝ၊ သူတို့ရဲ့အခကျအခဲတှေ၊ ဆငျးရဲမှုကွောငျ့ သူတို့ကွုံတဲ့အတားအဆီးတှေ၊ အမြိုးသမီးငယျလေးတှဟော ပညာတတျဖို့ဘာကွောငျ့လိုအပျကွောငျး၊ ပညာရေးဟာ အမြိုးသမီးငယျလေးတှကေို ဘယျလိုပွောငျးလဲစနေိုငျကွောငျးကိုပါရေးသားထားပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ပဲ ဒီတဈပတျမှာ ယောငျးတို့အတှကျ အကျဒျမငျက ရှေးခယျြပေးခဲ့တာပေါ့…
ထကျထကျမွကျမွကျ ယောငျးလေးတှေ ဖွဈနိုငျကွပါစကှေယျ…
Tagged Book review, Education, women empowerment
Posted on January 10, 2019 Author Sugar Cane
လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး ဖတ်ရလွယ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်လေး (၂) အုပ်
Posted on September 14, 2018 Author Sugar Cane